Openload က ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ Download လုပ်နည်း - မောငျပေါကျ ( Maung Pauk )
Home Android Application Downloader Mobile Downloader ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း Openload က ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ Download လုပ်နည်း
Openload က ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲကနေ လွယ်လွယ်ကူကူ Download လုပ်နည်း
Maung Pauk at 11:40:00 PM Android Application, Downloader, Mobile Downloader, ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း,
Openload ကနေ ဖိုင်တွေကို ဖုန်းထဲကဒေါင်းမယ်ဆိုရင် တော်တော် စိတ်ညစ်ရတယ်.. Pop-up Ads တွေကျော်ရ၊ အခြားလင့်တွေကို ရောက်သွား နဲ့ လိုရင်းကို မရောက်နိုင်ဘူး.. ကဲ စိတ်မညစ်ရအောင် အောက်ကဖိုင်လေး ၂ ခုဒေါင်းပြီး Install လုပ်လိုက်..
1. Download UC Browser ( ရှိပြီးသားဆို Download လုပ်ဖို့မလို )
2. Openload Ad Blocker
UC Browser ကိုဖွင့်..
အပေါ်ဆုံးက Address Bar မှာ ကိုဒေါင်းမယ့်လိပ်စာကိုနှိပ်..
ကျွန်တ်ာကတော့ CM ကနေ Video ဒေါင်းပြမှာမို့ channelmyanmar.org ကိုရိုက်ထည့်၊ ကိုယ်ဒေါင်းချင်တဲ့ Video ကိုနှိပ်ပြီး Openload Link ကိုနှိပ်ပေးလိုက်တယ်..
ပြီးရင် Skip ကိုနှိပ်ပြီးကျော်.. Pop-up တွေ မပေါ်ဘူး.. openload Link ကိုရောက်ရင် အပေါ်က Address Bar ကိုဖိထား.. Select ကိုရွေးလိုက်.. ပြီးရင် Copy ကိုရွေးထား..
ဖုန်းရဲ့ Home Key ကိုနှိပ်ပြီးထွက်.. Home Key ဆိုတာ Back Key နဲ့ Menu Key တွေနဲ့ အလယ်မှာရှိလေ့ရှိတယ်..
ပြီးရင် Openload Ad Blocker apk ကိုဖွင့်. Paste Openload Link Here ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဖိထားပြီး Paste ကိုနှိပ်.. (အဲဒီမှာ အခြားလင့်တစ်ခုခုရှိနေရင် ဖျက်ပစ်ရမှာ.. ပြီးမှ ဖိထားပြီး Paste ကိုနှိပ်..)
ပြီးရင် Download ကိုနှိပ်.. Openload Link ပွင့်လာရင် Download ကိုနှိပ်.. Download ကိုထပ်နှိပ်.. နောက်ဆုံးတော့ ဘာနဲ့ Download လုပ်မလဲဆိုတာကို မေးတယ်.. ကျနော်ကတော့ ADM နဲ့ ပဲ Download လုပ်လိုက်တယ်..
Openload ကနေ ဖိုငျတှကေို ဖုနျးထဲကဒေါငျးမယျဆိုရငျ တျောတျော စိတျညဈရတယျ.. Pop-up Ads တှကြေျောရ၊ အခွားလငျ့တှကေို ရောကျသှား နဲ့ လိုရငျးကို မရောကျနိုငျဘူး.. ကဲ စိတျမညဈရအောငျ အောကျကဖိုငျလေး ၂ ခုဒေါငျးပွီး Install လုပျလိုကျ..
1. Download UC Browser ( ရှိပွီးသားဆို Download လုပျဖို့မလို )
UC Browser ကိုဖှငျ့..
အပျေါဆုံးက Address Bar မှာ ကိုဒေါငျးမယျ့လိပျစာကိုနှိပျ..
ကြှနျတျာကတော့ CM ကနေ Video ဒေါငျးပွမှာမို့ channelmyanmar.org ကိုရိုကျထညျ့၊ ကိုယျဒေါငျးခငျြတဲ့ Video ကိုနှိပျပွီး Openload Link ကိုနှိပျပေးလိုကျတယျ..
ပွီးရငျ Skip ကိုနှိပျပွီးကြျော.. Pop-up တှေ မပျေါဘူး.. openload Link ကိုရောကျရငျ အပျေါက Address Bar ကိုဖိထား.. Select ကိုရှေးလိုကျ.. ပွီးရငျ Copy ကိုရှေးထား.. ဖုနျးရဲ့ Home Key ကိုနှိပျပွီးထှကျ.. Home Key ဆိုတာ Back Key နဲ့ Menu Key တှနေဲ့ အလယျမှာရှိလရှေိ့တယျ..
ပွီးရငျ Openload Ad Blocker apk ကိုဖှငျ့. Paste Openload Link Here ဆိုတဲ့နရောမှာ ဖိထားပွီး Paste ကိုနှိပျ.. (အဲဒီမှာ အခွားလငျ့တဈခုခုရှိနရေငျ ဖကျြပဈရမှာ.. ပွီးမှ ဖိထားပွီး Paste ကိုနှိပျ..)
ပွီးရငျ Download ကိုနှိပျ.. Openload Link ပှငျ့လာရငျ Download ကိုနှိပျ.. Download ကိုထပျနှိပျ.. နောကျဆုံးတော့ ဘာနဲ့ Download လုပျမလဲဆိုတာကို မေးတယျ.. ကနြျောကတော့ ADM နဲ့ ပဲ Download လုပျလိုကျတယျ..
Android Application, Downloader, Mobile Downloader, ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း
Android Application Downloader Mobile Downloader ဒေါင်းလော့လုပ်နည်း